Okuwukuphela kwendlu ogwini - Bedroom 2 - I-Airbnb
Okuwukuphela kwendlu ogwini - Bedroom 2
Barra de la Cruz, Oaxaca, i-Mexico
Ikamelo elihlanganyelwayo e-indlu eyindilinga ibungazwe ngu-Alejandro
HAMBA UYE ESEPHEZWENI. I-Shady, inokuthula futhi iyimfihlo kakhulu. Indlu yesitayela se-rustic, yase-Mexico ephethwe endaweni. Okuwukuphela kwendlu e-Barra surf beach. Ungakwazi ukuqasha igumbi (lolu hlu olwekamelo lokulala 2) kuwe noma wabelane nomngane, inani lekamelo lihlanganisa umuntu oyedwa noma ababili. Siqasha INDLU YONKE noma NGEGUMBI vele ubuze u-Eric ukuthi ufuna indlu yonke yini, ngokuvamile udinga ukuqasha igumbi ngalinye kwamane. Bona ukufakwa kuhlu kwamanye amagumbi ngezansi. Indlu izungezwe amasundu kakhukhunathi angaphezu kuka-200.
Indlu inamakamelo okulala amane. ezintathu phansi kanye negumbi lokuphumula elingaphezulu elivulekile, elinemibhede nama-hammocks, okuthi uma kukhululekile kusetshenziswe njengendawo yesibili yokuphumula. Lolu hlu olwekamelo lokulala 2. Igumbi lokulala 1 linezibuyekezo eziningi njengoba sike sabala indlu noma ingxenye yayo lapha - https://www.airbnb.ca/rooms/12229951
Igumbi lokulala 1 - https://www.airbnb.ca/rooms/12229951
Igumbi lokulala 3 - https://www.airbnb.ca/rooms/27884424
Igumbi lokulala 4 (Phezulu) - https://www.airbnb.ca/rooms/27884707
Ikamelo ngalinye kwamane lokulala lihlelwe ngokwehlukana, njengoba lokhu kukwenza ukwazi ukubona ukutholakala kwegumbi ngalinye.
Ikhefu lephuzu, cishe imizuzu eyi-10 ukuhamba ogwini, isikhathi esanele sokubuka ukuvuvukala nokusebenza kwamasethi. Isanda kudlula indawo yokudlela futhi idumile phakathi komphakathi wokuntweza. Ungabona ulwazi oluningi namavidiyo ngokungena ku-"Barra de la Cruz." Ezinyangeni zasehlobo kusukela ngoNovemba kuya kuFebhuwari amagagasi abe mancane futhi abe nobumnandi obuningi, ikakhulukazi kubafundi kanye nezingane (Noma abatshuzi abangawudingi umgqomo omkhulu). Isizini enkulu yamagagasi, ngo-Ephreli kuya kuSepthemba, ingabona amagagasi angaphezulu ahamba kabili egudla iphuzu.
Ibhishi lonke linikeza amakhefu ahlukahlukene ahlukene osayizi abahlukahlukene kuye ngokuvuvukala.
Sibe namaqembu amaningi ahlala endlini ukuze ajabulele ukuntweza emanzini. Usuku olujwayelekile lungabandakanya ukuntweza kwasekuseni amahora angu-2 - 4. Uma ubuyela endlini ukuyodla isidlo sasemini, intambama ngokuvamile isetshenziswa ilele ezindlini zokungcebeleka niqhabula ukhukhunathi noma ubhiya; noma ukubuyela ukuyofuna enye i-surf, kungaba ngesikhathi sekhefu noma phambi kwendlu.
I-Casa de Coco's iyindawo enhle yokuvakashela ama-surf. Usebhishi, ogwini lolwandle.
Ezinye Izakhiwo ogwini
Kunezinye izakhiwo ezimbili ogwini
Indawo yokudlela yase-Beach (El Comador)
Le ndawo yokudlela encane nebha imayelana nohambo lwemizuzu engu-6 ukuya endaweni, khona kanye lapho umgwaqo osuka edolobheni uphelela khona ogwini. Lokhu kuqhutshwa endaweni futhi kunikeza ukudla okuhle neziphuzo ezibandayo uma iqhwa nezinto ezitholakalayo zikhona. Kunezihlalo namatafula ngaphansi komthunzi wesitayela seRamada (kusetshenziswa ukhuni lwendawo namasundu kakhukhunathi). Lena indawo ekahle yokuhlala ngaphansi komthunzi nomoya wasolwandle, ujabulele ukuqabuleka noma ukudla okulula/ukudla futhi ubuke abantu bentweza endaweni yekhefu, noma ubone inyoni yasolwandle indiza idlula. Ukudla kwasolwandle kuyinto ekhethekile, njengoba izinhlanzi zibanjwa phambi kwendawo yokudlela ukuze kujabulele izivakashi.
I-Turtle Hatching Base (Ikamu Lezazi Zezinto Eziphilayo)
Esinye isakhiwo ogwini cishe 2 km ngakolunye uhlangothi. Emuva ogwini kunesizinda esincane, lapho abacwaningi bofudu bagcina khona izinto ezidingekayo njll. Ogwini lolwandle kunocingo olubiyelwe endaweni lapho izazi zezinto eziphilayo namanye amavolontiya abeka amaqanda ofudu abawaqoqayo ngaphansi kwesihlabathi. Lokhu kwenza amaqanda avikeleke futhi aqashwe kuze kube yilapho achanyuselwa, bese kulawulwa ukukhululwa, ukuze kwandiswe ithuba lokusinda lofudu. Ngenhlanhla kusukela lolu hlelo lwaqala eminyakeni engamashumi amathathu edlule, (Lapha nakwezinye izindawo eMexico) izinombolo zofudu ziyaqhubeka nokwanda.
Qaphela: Esikhathini sonyaka, ikakhulukazi u-Nov-Feb (ANGIQINISEKILE UKUTHI AKHO IZINSUKU EZIQINILE) izazi zebhayoloji zehla zenyuka ogwini ngezimoto ezincane ezinamasondo amane, ziqoqa amaqanda ofudu futhi zisiza oomama bofudu njengoba kudingeka. Ngokukhuluma nezazi zesayensi yezinto eziphilayo futhi ubuke lapho ezima khona, ungathola izimfudu zibekela amaqanda. Ngokumane uphume ogwini ebusuku, ngethoshi elihle, ungase uzitholele wena ufudu. Izazi zezinto eziphilayo zingase futhi zikubandakanye ekukhululeni izimfudu. Ukubona izimfudu zibekela amaqanda noma zichanyuselwa kusekelwe ekutheni uyozifuna kangaki. Ngezinye izikhathi achanyuselwa ngaphakathi kwendawo ebiyelwe, noma njengendlela yokukhulula okulawulwayo, futhi ngezinye izikhathi avele achanyuselwe esihlabathini. Ekuseni, uzovame ukubona amathrekhi abo lapho bekhuphuka khona ogwini ukuze babeke, noma amagobolondo ezingane zomfudu. Lokhu akuwona umsebenzi wezivakashi, wena nje zifudu, ibhishi elivulekile lokuntweza, izinkanyezi eziningi futhi uma unenhlanhla inyanga egcwele.
Qaphela: Izimfudu zivikelekile, ngakho-ke kuhle kakhulu ukwazisa ongoti bezinto eziphilayo ukuthi unentshisekelo yokuzibona nokuthi uyaqonda ukuthi kufanele uzihloniphe. (Awusebenzisi ifleshi kukhamera yakho kuze kube ngemva kokuba umama esezalele amaqanda akhe, noma uwathinte, isibonelo)
4.91 · 36 okushiwo abanye
I-Barra de la Cruz
Ungafika kanjani lapho usuka ekhaya
Idolobhana lendawo lifinyeleleka ngezindlela ezimbili;
Okokuqala; ngokuhamba ogwini lolwandle (cishe amaminithi angu-8) kanye nokuhamba ngezinyawo, itekisi noma ukugibela umgwaqo oya edolobheni. (Ngemva kwehora lesithupha ntambama, okuwukuphela kwendlela ukuhamba ngezinyawo njengoba bevala isango). Ukuhamba kuthatha cishe imizuzu engama-30. Lena inketho elula kakhulu kusihlwa, kodwa hhayi kahle kakhulu ekushiseni kosuku.
Okwesibili; kuwuhambo olumnandi lokuya edolobheni eduze "nomgwaqo ongemuva." Le ndlela idlula emhlabeni wabalimi futhi inikeza umthunzi. Kungcono ukuboniswa indlela okokuqala, kodwa kungenzeka ngokwakho. Kunamanzi athile adinga ukuxoxiswana futhi ngokuvamile kuba khona “ibhuloho” logodo elilodwa. (Ungasebenzisa isigxobo ukuze uthole ukwesekwa!) Kumnandi kakhulu, kodwa kuhle kakhulu uma unesimo sengqondo sokuzamazama! Qaphela: Ngenkathi eyomile lokhu kulungile, phakathi nenkathi emanzi, kungcono ukubuza umphathi wakho.
Kukhona indawo yokudlela yasePizza nezinye izinketho zokudlela. Kukhona i-Las Gemalas (ama-taco amnandi) i-Pepes nayo ihlinzeka ngokudla nsuku zonke. Lesi isigodi sendawo saseMexico sakudala, esinezinsiza zezivakashi. Uma ukhuluma kakhulu nabantu bendawo uba nethuba elingcono lokuqonda zonke izinketho zakho. Lokhu kuya ezindaweni zokudlela, ama-cantinas kanye nokudla nokunye. Uma uthanda umuzwa wakudala wedolobha lasemakhaya laseMexico (hhayi idolobha lezivakashi), uzoyithanda le ndawo.
Umamukeli wethu wasekhaya, akahlali endlini. U-Eric nomndeni wakhe bazoba seduze futhi bajabulele ukusiza njengoba kudingeka, kodwa futhi bahloniphe ubumfihlo bakho. Bakhuluma kakhulu iSpanishi, kodwa banesineke futhi bayakujabulela ukuhlalisa wonke umuntu.
Kunezindawo ezintathu zokulala.
1. Kunamakamelo amabili phambi kwendlu. Kokubili kunombhede okabili, olungele imibhangqwana, futhi kuhle ukujabulela imisindo yamagagasi njengoba edlikiza ezindongeni zendlu. Imaphakathi kakhulu, kunembobo engaphakathi endlini yokuphumula.
2. Igumbi lokulala elingemuva. Imibhede emithathu yokulala. Inomnyango oya endlini yokuphumula engaphakathi kanye nomnyango ovulekela ngaphakathi/ngaphandle kwendawo yeshawa.
3. Phezulu. Umbhede ophindwe kabili kanye nama-stretcher amathathu. Le ndawo iseduze nempilo yeqiniso yasePacific kunalokho ongayithola noma yikuphi. Ngaphansi kwezandla ezinkulu ezilukiwe “I-Big Palapa”, le ndawo inezindonga eziphansi kuphela ezivumela umoya. Ngenxa yomoya omusha wasePacific, le ndawo iyintandokazi yokuphumula kuma-hammocks noma emibhedeni phakathi nentambama ethule.
Imibhede ephindwe kabili yonke ingomatilasi abajwayelekile basentwasahlobo.
Imibhede yesitayela se-Single camp stretcher. Lezi zenziwa endaweni ngokhuni kanye nempahla elukiwe enomatilasi omncane. Alula kodwa anethezekile.
Amashidi namathawula. Izindlu zifika namashidi kanye nengubo yokulala embhedeni ngamunye.
Izidleke Zomiyane. - Yonke imibhede ifakelwe amanethi omiyane. Umkhuba ojwayelekile uthi; njalo ntambama/kusihlwa nikina imibhede bese niphinda nishutheka amanetha omiyane. Lokhu kuqinisekisa ukuthi umbhede wakho awunaso isihlabathi nanoma yiziphi izivakashi ezingafunwa noma izidalwa ezincane. Sicela uhlole amanetha ukuze uthole noma yiziphi izimbobo noma izinyembezi futhi wazise abasebenzi bethu, uma unomuzwa wokuthi awawona ubufakazi bomiyane.
Indawo yokuhlala engaphandle
Isimo sezulu sendawo senza indawo yangaphandle ibe indawo ekahle yokuzijabulisa. Ngenxa yalesi sizathu, itafula elingaphandle liyindawo ephakathi nendawo yokudlela nokudla. Kukhona amaHammocks kanye netafula lomphakathi. Kukhona nama-hammocks phezulu.
Ngaphakathi kunefenisha encane, ngaphandle kwendawo yokulala. Ekamelweni elikhulu (Igumbi lokufunda) kuneshalofu lezincwadi eligcwele izincwadi nezinye izinto zokukugcina umatasa. Zizwe ukhululekile ukusebenzisa, ukushintshanisa, noma ukushiya izincwadi.
Indlu ngokwayo, ikhululekile futhi iyasebenza. Sibe namaqembu nemindeni ehlala, futhi abantu abaningi bayayithanda isipiliyoni, nokho akusikho okwawo wonke umuntu. Inesitayela se-rustic sangempela saseMexico. Kulabo abafuna indawo yokuqala yokuhlala yamahhotela omhlaba, lokhu akutholakali noma yikuphi e-Barra de la Cruz. Ikhaya elalabo abanomuzwa wokuzijabulisa futhi bayayithokozela indlela yaseMexico. Uma kunguwe lona, uzomangala ngokujabulisayo.
Ngokuvamile emini akukho ukukhathazeka okuncane ngezinambuzane. Kusihlwa, ngezinye izikhathi kuba nomiyane futhi ngezinye izikhathi abekho. Indlu iseduze nechweba namaxhaphozi ngakho kufanele kuqikelelwe maqondana nezinambuzane. Sekushiwo lokho, enye yezinto ezinhle mayelana nempahla yonke imisindo yemvelo.
Njengomthetho ojwayelekile, nakuba kungadingeki ngaso sonke isikhathi, kufanele ukhanyise amakhoyili omiyane nxazonke noma ngaphansi kwetafula elingaphandle futhi ugqoke izinto zokuxosha. Ungase ugqoke amabhulukwe amade ukuze unciphise ingozi yokulunywa, uma usengozini. Ngalesi sizathu ukuletha izingubo ezingasindi kakhulu ezizogqokwa kusihlwa kuwumqondo omuhle.
Izidalwa ezincane hhayi ezincane kakhulu
Indlu iphathwa izinambuzane futhi ihlolwe ngaphambi kokuhlala kwakho. Iqiniso lokuphila eduze nemvelo imvelo nayo iseduze kakhulu nawe. Uma unenhlanhla ungase ubone ufezela noma inyoka. Lokhu akwenzeki kaningi kodwa kuyenzeka. Izinyoka azinabungozi futhi ofezela bazokugwema uma bekwazi. Umlayezo lapha, ukuthi ingqondo evamile ibusa, hlola izicathulo zakho (nakuba abantu abaningi bake baba izimbadada kuphela!) futhi ugcine iso. Qinisekisa ukuthi uhlola imibhede yakho futhi ubeke iso kunoma yiziphi izidalwa ezingafunwa okungenzeka zibe nesibindi sokungena endlini. Eminyakeni engu-25, asikaze sibe nomuntu owake walunywa yinyoka noma ufezela.
Umamukeli wethu wasekhaya, akahlali endlini. U-Eric nomndeni wakhe bazoba seduze futhi bajabulele ukusiza njengoba kudingeka, kodwa futhi bahloniphe ubumfihlo bakho. Bakhuluma kakh…
Hlola ezinye izinketho ezise- Barra de la Cruz namaphethelo